Tyson Foods ayaa hakisay howlihii ay ka waday xarun hilibka doofaarka ee Waterloo | KWIT
Joornaalka Sioux City Journal ayaa sheegaya in ninku uu yahay 64 jirka Raymundo Cor Guud oo ka soo shaqeeyay warshad Tyson oo ku taal Dakota City.
Xaaskiisa ayaa sheegtay inuu dhintay Sabtidii kadib markii ugu horreysay uu dareemay inuu buko qiyaastii laba toddobaad ka hor. Waxay sheegtay in Guud ahaan ay sii wadatay shaqadeeda oo aysan marin marin imtixaan.
Tyson ayaa warbixin uu siiyay wargeysku ku sheegay in shirkaddu "aad uga xun tahay guuldaradii xubin kooxeed ka timid" ayna "ku hayaan qoyska fikirka iyo salaadda."
Tyson Foods ayaa hakisay howlihii ay ka wadday xarun hilibka doofaarka ee Waterloo.
Shirkadda waxay leedahay xiritaanku wuxuu dharbaaxo ku yahay beeraleyda hodanka ah, wuxuuna carqalad ku keeni karaa hilibka doofaarka ee qaranka.
Baaqa ayaa imanaya iyada oo loo shaqeeyayaashu ku dhibtoodeen xakameynta fayraska dhirta waaweyn ee hilibka lagu xareeyo.
Dhowr geed oo kale oo xirxiran ayaa si kumeelgaar ah loo xiray.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Nebraska ayaa soo sheegaya warbixin maalin dhaweyd ah oo ah sagaal dhimasho oo COVID-19 ah, taasoo guud ahaan gobolka ka geleysa cudurka 42.
Kristian South Dakota Gov. Kristi Noem waxay sheegtay inaysan dooneynin dadka inay u socdaan tartanka wasakhda ee loo qorsheeyay inuu ka dhaco Park Jefferson Sabtida.
Si kastaba ha noqotee, waxay sheegtay inaysan joojin doonin dhacdada inay dhacdo.
Boqolkiiba toban toban baararka iyo maqaayadaha Iowa ayaa sheegaya inay si rasmi ah u xirmi doonaan haddii aysan awoodin inay ugu yaraan qayb ahaan dib u furaan illaa 1-da May.
Marka la gaaro Luulyo 1deeda, afartii qofba afar ayaa sheegaya inaysan dib u furan doonin. Taasi waa sida lagu sheegay ra'yi ururinta makhaayada Iowa.
Guddoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa ku amray makhaayadaha inay xiraan macaamiisha khamriga cunaya 17-ka Maarso.
Ilaa waqtigaas, ku dhawaad ​​boqolkiiba 90 baararka iyo makhaayadaha ayaa sheegaya inay yareeyeen shaqaalaha.